हामीले दैनिक जिवनमा गर्ने ५ गल्तीहरु, स्वास्थ्य विशेष | Hamro Patro
स्वस्थ्य रहन पाउनु सबैको अधिकार र कर्तब्य दुबै हो , हैन र ? तर यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफूलाई स्वस्थ्य राख्न सकिरहेका हुँदैनौ । हाम्रो अस्वस्थ्यकर बानी अनि अनभिज्ञताका कारणले हामी अस्वस्थ्य बन्दै गएका कुराहरुको पत्तो हामीलाई नै हुँदैन् । आउनुहोस् आज छलफल गरौ, हामीले दैनिक जिवनमा गरिरहेका ५ वटा गल्ती जसलाई सुधारेमा हामी धेरै हदसम्म स्वस्थ्य बन्न सक्दछौ ।
गल्ती नंबर १ : विहान छिटै नउठ्ने
वढ्दो शहरीकरण अनि ब्यस्त जिवशैलीले रातीसम्म बसेर काम गर्ने अनि विहान ढिलो उठ्ने क्रम वढ्दो छ । यो अत्यन्त नराम्रो हो, छिटो नउठ्नाले दिनभरि एकतमासको तनाब रहने आफ्नो ठाँउमा छ भने अर्कोतर्फ दिनको समय नै हाम्रो लागी छोटो बन्न पुग्दछ । विहानै उठेर सकेसम्म एउटा छोटो शारीरीक अभ्यास या मर्निगं वाल्क गर्ने वानी अत्यन्त फाईदाकारी छ ।
गल्ती नंबर २: प्रशस्त पानी नपिउने
गल्ती नं ३ :धेरै काम एकैपटकमा गर्न खोज्नु अर्थात मल्टीटास्कीगं
हामीसबैलाई हतार छ, एकै फेरमा धेरै भन्दा धेरै विभिन्न कार्य गर्न खोज्नाले पनि हामीमध्य धेरैलाई तनाव र विभिन्न शारीरीक एवं मानसिक रोग लाग्दछन् । स्मरण रहोस् संसारका केवल २ प्रतिशत जनसख्याँले मात्र मल्टीटास्कीगं राम्ररी गर्न सक्दछन् । दिमागलाई खुल्ला र खाली राखेर एक समयमा एकैवटा मात्र कार्यमा केन्द्रित भई गरेमा हामी तनाव मुक्त हुन्छौ र साथै हाम्रो उत्पादकत्वमा पनि वृद्धी हुन्छ ।
गल्ती नं ४ :आफ्ना लागी समय नछुट्याउने
जिवनको दौडधुपमा हामी यति ब्यस्त हुन्छौ कि आफूलाई नै बिर्सन पुग्छौ । मानिस अझै पनि त्यही सामाजिक प्राणी हो जो ब्यक्तिगत र सामाजिक परिवेश विच वाँच्दछ । समाज र ब्यक्ति उसकालागी उत्तिनै महत्वपूर्ण छ । हामीले आफ्नो ब्यक्तिगत सोच, योजना अनि विचारकालागी पनि केही एकान्त समय विताउन जरुरी छ, आफू के गर्दा खुशी हुन्छु ? भोलीको दिनमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अनि आफूमा आएका राम्रो परिवर्तनहरु मुल्याकंन गर्दै उत्साहीत र प्रेरित भएर अघि वढ्न ब्यक्तिगत समय जरुरी छ है ।
गल्ती नं ५ :शिकारी तरिकाको खाना खाने वानी
हामी नेपालीहरु एउटा कुराकालागी अत्यन्त ज्ञानी छौ र त्यो हो, भोकै बस्न् ।
अनि जब भोकैपनावाट केही खाना खाने मौका पाँउछौ तब हामी शिकारीले जस्तो हतार हतार फेरि पाउला या नपाउला भनेर खाईदिन्छौ । यो बानी अत्यन्त गलत हो है, समय समयमा खाने अनि कम्तीम एकपटक दिनको अत्यन्त स्वस्थ्यकर सन्तुलीत आहार गर्न जरुरी छ ।
राती अत्यन्त धेरै खाने अनि विहानै भौके पेटमा लामो मर्निगं वाकमा निस्कने वानी पनि गलत हो, राती हल्का खाने अनि विहान केही खाएर मर्निगं वाकमा निस्कनाले स्वस्थ्य राम्रो हुन्छ ।
ल त सबैजना हाम्रो पात्रो प्रयोगकर्ता, यी ५ वानीहरुलाई सुधारेर अघि वढौ यस २०७४ सालमा ।
हाम्रो पात्रोकालागी विभिन्न वेभसाईटहरुको अध्यनका आधारमा सुयोग ढकाल